Ifekthri Yezinsimbi Zokuhlola Izimboni - Abakhi Bezinsimbi Zokuhlola Izimboni Yase-China, Abahlinzeki
I-DRK304A Inkomba Ye-oksijini
Inzwa ye-oxygen enembe kakhulu, umphumela wokuboniswa kwedijithali, ukunemba okuphezulu, impilo yesevisi ende, isakhiwo esilula, ukusebenza okulula, asikho isidingo sokubala, ukusebenza kwephaneli, ukucindezela kwegesi, indlela ecacile, enembile, elula, enokwethenjelwa, ephezulu, evela kwamanye amazwe izilawuli zokuhlaziya umoya. ukugeleza kwe-oxygen.
I-DRK218 Voltage Breakdown Test Instrument
Ithuluzi lokuhlola ukuwohloka kwamandla ka-DRK218 lilawulwa yikhompyutha.Ngohlelo olusha lwesifunda oludidiyelwe lwedijithali oluthuthukiswe ngokuzimela yinkampani yethu, Uhlelo Lokulawula Isofthiwe luyaqedwa.
I-DRK110B Imitha Yokumunca Amanzi
Ukumuncwa kwamanzi ephepha e-DRK110B iyithuluzi lokuklama nokukhiqiza ngokusekelwe kumingcele yezobuchwepheshe kanye nezidingo zobuchwepheshe ezicaciswe kuhulumeni.
I-DRK250 I-Constant Temperature and Humidity Box
I-DRK250 Lo mshini ulingisa izinhlobonhlobo zezimo zemvelo, ukuhlola imikhiqizo ehlukahlukene nezinto ezingavuthiwe ukumelana nokushisa, ukumelana nomswakama, ukumelana nesibindi, nokumelana nezinga lokushisa eliphansi.Ifanele iphepha, ukuphrinta, i-electronics, ugesi, insimbi nezinye izimboni.
DRK251 Ibhokisi lokuguga
I-DRK251 Thermal Index Test Chamber ifanele ukuhlolwa kokumelana nokushisa, izingxenye ze-elekthronikhi, kanye nemikhiqizo eyenziwe ngepulasitiki yezinto zikagesi zokuvala ukushisa.
I-DRK252 Ibhokisi Lokumisa
Inkampani yethu yakhelwe ngebhokisi lokomisa le-DRK252, izinto zokwakha ezinhle, ubuciko obuhle, futhi yakhelwe ngokugcwele ngokuya ngamazinga afanele wemishini yokuhlola.